Ahazoana manampy olona 240 000 : nahazo tohana 5 tapitrisa euros ny Pam | NewsMada
Ahazoana manampy olona 240 000 : nahazo tohana 5 tapitrisa euros ny Pam
Nahazo vola mitentina 5 tapitrisa euros avy amin’ny governemanta alemana ny Fandraharanasan’ny Firenena mikambana misahana ny sakafo (Pam), ny faran’ny herinandro lasa teo. Ahafahana mamonjy olona any atsimo, hatramin’ny 240 000, tratran’ny hanoanana ny tohana azo, araka ny fanazavan’ny solontenan’ny Pam, Moumini Ouedraogo. Hampitombo ny asan’ny Pam any an-toeana ny vola amin’ny fanamboarana fotodrafitrasa mitondra vokatsoa ho an’ny rehetra toy ny lalana. Omena sakafo izy ireo, rehefa avy miasa iarahan’ny BNGRC sy ny ONG ny tetikasa.
Ho an’ny fiaraha-miasa amin’ny Ofisim-pirenena ho an’ny fanjarian-tsakafo, hitohy ny fizarana fanampin-tsakafo mahavelona ho an’ny ankizy madinika 6-23 volana sy ny vehivavy mitondra vohoka na koa mampinono.
Entin’ny Pam hividianana ny ambim-bava eny anivon’ny tantsaha mpamokatra ny ampaham-bola amin’ny tohana azo. Hataon’ny Pam ho tahiry ao aminy, ny vokatra hovidina.
“Efa mifanohana hatrany ny asan’ny Pam sy ny cooperation allemande any atsimo nandritra ny taona maro”, hoy ny masoivoho alemana eto amintsika, Harald Gehrig.
Tao anatin’ny telo taona, nihamafy ny haintany niseho any atsimo. Iray tapitrisa ny olona efa nahazo tohana ara-tsakafo indrindra amin’ny fotoana maitsoahitra izay nifarana ny volana mey lasa teo. Tamin’ity taona ity, vokatry ny orana, antenaina hitombo ny vokatra miakatra nefa na izany aza, 400 000 ny olona mbola sahirana ara-tsakafo any.